FÖRNUFTIG ikuku ikuku nke ikuku na IKEA | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | 17/03/2021 15:00 | General, Nyocha
Ndị na-eme ka ikuku dị ọcha abụrụla ngwa ahịa achọrọ nke ukwuu, enwere ọtụtụ ụdị abanyela n'ọkwa siri ike n'ahịa maka ngwaahịa ndị a pụrụ iche, agbanyeghị, ọ bụ oge tupu ndị nnukwu arịa ụlọ Sweden bịarute iji mezuo ngwaahịa a kara aka nọrọ na ọtụtụ ụlọ.
IKEA amalitela FÖRNUFTIG, ihe nkwụcha ụgwọ ikuku ikuku nke nwere nnukwu ikike na nzacha dị ọnụ ala, anyị nyochara ya nke ọma. Nọnyere anyị ma chọpụta ihe kpatara ngwaahịa IKEA a nwere ike ji bụrụ onye kacha ere ahịa ma kwụsie ike na ngwaahịa ndị kachasị ọnụ.
Dị ka n'oge ndị ọzọ, anyị kpebiri iso ihe nyocha a nke vidiyo nke ị ga-enwe ike ịhụ nyocha nke ikuku nke ikuku. IKEA, ma ọtụtụ ihe ndị ọzọ, anyị na-aga na-egosi gị otú o si arụ ọrụ, otú i nwere ike ịgbanwe ihe nzacha na N'ezie niile nkọwa dị ka larịị nke mkpọtụ na ọ bụ ike na-eme. Ya mere Anyị na-akwado ka ị lee vidiyo ahụ wee were ohere ịdenye aha na chanel anyị, ebe anyị ga-aga n'ihu bulite nyocha na-atọ ụtọ banyere ngwaahịa ụlọ ga-eme ka ndụ gị dị mfe.
1 Nzube na ihe: Na ezi usoro IKEA
2 Di iche-iche nke nzacha na ikike ịdị ọcha
3 Ojiji kwa ụbọchị na ọkwa mkpọtụ
Nzube na ihe: Na ezi usoro IKEA
Ọ bụrụ na ihe arụ emetụla ya aka, nke ahụ bụ ihe IKEA doro anya nke ọma na imepụta na ihe nke ngwaahịa ndị ahụ anaghị emetụta arịa ụlọ. Ngwaọrụ ya niile, ụda ma ọ bụ ngwaahịa gadaget na-adabere n'otu plastik, otu ndo na otu imewe ahụ, nke ahụ na-enyere anyị aka ịmepụta gburugburu na njirimara mara mma. dị ka ị pụrụ ịhụ na anyị nyochaa nke oriọna na ọkà okwu na IKEA e mere na Sonos. Na nke a ha nwere nnwapụta m, mana ọ tụrụ ntakịrị ọkwa.
Akụkụ: X x 45 31 11 cm
Ibu ibu: 3,92 n'arọ
Anyị na-azọ nzọ na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha oji ka o kwekọọ onye na-azụ ya na ihu igwe na-acha ntụ ntụ. Ihe ndị a niile na-enye mgbakwunye nke ịdị mfe, nguzogide na ịdị ọkụ na ngwaahịa ahụ, na-ele anya na-enweghị mmetụta adịchaghị, ihe ha choro bu imeghari onu ahia ya. Na azụ anyị nwere nkwado, enwere ike idobe ikuku ikuku IKEA ma kwụ ọtọ ma kwụ ọtọ, arịọnụ na mgbidi ma ọ bụ na-enwere ike ibugharị na jikọtara ya na nịịl ya na nkwado ụkwụ na-esonye n'ime igbe ahụ ma kwekọọ na agba nke ngwaahịa a.
Igbe a nwere kaadiboodu nke na-abu akara ka ijigide ya na mgbidi (atụfula ya)
Ma kickstand (gụnyere) na naịlọn ahụ nwere ike ịhazi
Abụọ njigide naịlọn na nkwado ụkwụ ka emere ya Mbughari, nke ga - kwado mgbanwe nke echiche n’ihe banyere ịchọ mma. Na azụ anyị ga-enwe njikọ eriri USB nke ga-enyere anyị aka inye ya ọnọdụ dị iche iche na-enweghị mkpa ịhụ eriri ndị na-agbanye mgbidi. Igwe a, n'aka nke ọzọ, na-emesapụ aka ma nwee ihe nkwụnye ikike nwere ikike na nke akara.
Di iche-iche nke nzacha na ikike ịdị ọcha
Na nke a, ikuku nchacha FÖRNUTFIG si IKEA Enwere ike iji ya na nzacha ya abụọ n'otu oge, ma ọ bụ naanị ya na isi isi. Nke a bụ n'ihi na otu n'ime ha so na ngwugwu ahụ ma a ga-azụta nke ọzọ dị ka nhọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ. Ndị a bụ ihe nzacha abụọ na-eme ka ikuku ikuku IKEA
HEPA 12 iyo: Anyị nwere mmesapụ aka gụnyere nzacha nke oke, nza a na-etinye 99,95% nke ihe ikuku dị ka pollen, ọ nwere arụmọrụ ruo PM2,5, nke pụtara na ọ na-ejigide ahụ karịa 2,5 nanometers. A ga-azụta nke a iche iche site na euro 5 ozugbo na IKEAotu osila di, enwere otu ihe n’ime ngwungwu.
Gas iyo: Nke a bụ nza akọwapụtara nke ọma ma hazie iji belata ọnụnọ nke isi na anwụrụ ọkụ, kama n'ebumnuche nke imepụta mmetụta nke ịdị ọcha na ịdị ọcha na ikuku, mana na-enweghị njide nke ahụ. Ihe nzacha a ga - enwe agwa "ọzọ", ọ bụ ya mere eji ere ya iche. site na 10 euro nwekwara ụlọ ahịa IKEA. Nke a na-eme ka ikuku dị ọcha site na iwepu iche iche ikuku na-emetuta ikuku dika VOCs na formaldehyde.
Ngwaọrụ ahụ ga-arụ ọrụ na ịchọrọ, ya bụ, anyị ga-arụ ọrụ ya. O nweghị usoro nyocha ikuku ọ bụla ma ọ bụ ịdọ aka na ntị karịrị akara ngosi ọkụ nke ọnọdụ nhicha nke nzacha na bọtịnụ RESET maka ya n'azụ mkpuchi ihu. Ozugbo anyị nwere nke ahụ doro anya, anyị na-ahụ ọkwa atọ nke ọcha site na roulette n'elu. N'ihe banyere ịgbalite ike kachasị elu, ọnụọgụ ikuku nke ikuku (CADR uru) bụ 130 m3 / h.
Ojiji kwa ụbọchị na ọkwa mkpọtụ
Mgbapụta ụda ga-adabere na ọkwa ike e kenyere, na opekata mpe mkpọtụ ahụ amachaghị (enwere ike ịhụ ya na vidiyo dị n'elu), agbanyeghị, mkpọtụ nke ike kachasị dị ka nke onye na-akwado ọdịnala na ike dị ala. Ya mere, ọkwa kachasị dị ala na-enye ohere ka ndụ a na-adị kwa ụbọchị na ọbụnakwa soro ya na-arụ ọrụ, ọ bụghị n'ogo kachasị ya, nke yiri ka a haziri maka ọnọdụ anwụrụ ọkụ ma ọ bụ oke pollen. Nke a ọ ga - enyere aka melite ahụike na ndụ ụbọchị nke ndị nwere allergies.
N'iji kwa ụbọchị ihe nhicha a na-emepụta ihe oriri kwa ụbọchị n'etiti 2,5 na 19 watts, dị obere, yabụ na anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị maka ngalaba a. Ekwesiri ighota na eriri njikọ di otutu ihe ma obu ihe nke mere ka odi nfe kariri n ’ule m iji bugoo ya n’ime ulo di iche. Iji ihe dị ka nkeji iri anọ na ise n'ime ụlọ nwere ihe nzacha atọ ahụ na-ewepụ ajọ ísì ọjọọ nke ụtụtụ, N'otu aka ahụ, ọrụ yiri ya na kichin ekpochapụla isi na nri. Agbanyeghị, ịmata n'ụzọ zuru ezu nsonaazụ ya gbasara pollen na ihe ndị ọzọ, ọ ga-adị mkpa iji nyochaa ikuku ozugbo, nke ahụ bụkwa isi ihe dị na ọnụego ya gbanwere.
O doro anya IKEA laghachi na wupu ahịa maka ngwa ejiji maka ụlọ, ihe nhicha ikuku a gosipụtara onwe ya zuru oke ma gosipụta atụmatụ enyi na enyi, na-eme ya maka naanị euro 59 ọ na-aghọ nhọrọ mbụ nke ndị ahịa mgbe niile nke ụlọ ọrụ Sweden.
Ihe na: 17 March nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 14 March nke 2021
Ghọta ihe na imewe
Iyo ọtụtụ na ọcha arụmọrụ
Enweghị ikuku nyocha
Njikọ njikọ ahụ bụ nke ya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » FÖRNUFTIG ikuku ikuku nke ikuku na IKEA
Huawei weputara mbipụta nke Fit Fit, Nke kachasị ọnụ ala smartwatch